Iwu Nzuzo | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Mgbasa mgbasa ozi - Nzuzo Nzuzo
Ịdị nzuzo gị dị anyị mkpa, ya mere, anyị emepewo Nzuzo Nzuzo nwere ozi dị mkpa dịka onye anyị bụ, otu na ihe mere anyị ji anakọta ozi nkeonwe gị, nakwa otu anyị si eji ma chekwaa ozi a, gụnyere na njikọ gị na ojiji nke weebụsaịtị na ngwa (ngwa). Anyị na-arịọ ka ị gụọ ya nke ọma ka o nwere ozi dị mkpa ma kọwaa otu esi akpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Biko mara na site n'iji ọrụ anyị, anyị chere na ị nwere obi ụtọ maka anyị ịhazi ozi nkeonwe gị dịka akọwara na Nzuzo Nzuzo a.
Anyị nwere ekele na ị na-agbaso akụkọ na ozi anyị nyere ụlọ ọrụ anyị ma tụlee ozi gbasara data gị. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ijide n'aka na nnyefe anyị dị nchebe na echekwara onwe gị. Tụkwasị na nke a, mgbe ị na-agagharị na ibe weebụ anyị, anyị na-agbaso na maka nyocha nyocha dịka nyochaa ihe ọhụrụ, njirimara enyi na isiokwu nke mmasị gị. Anyị ga-echekwa ozi ọ bụla ị na-edo onwe gị n'okpuru; dịka ọmụmaatụ, ozi ịntanetị ịkpọtụrụ, atụmatụ mmemme, jụrụ ajụjụ gbasara mmemme na ụlọ ọrụ na-egosi, rịọ maka ajụjụ ọnụ, akwụkwọ ọcha, webinars na asọmpi.
Ikike ịmara - Ị nwere ikikere ịmara gbasara data onwe anyị na-anakọta n'aka gị, na otu anyị si edozie ya.
Ikike nke ịnweta - I nwere ike ịnweta nkwenye na data gị na-edozi ma nwee ike ịnweta data nkeonwe gị.
Ikike ịhazigharị - I nwere ikike iji dozie data gị ma ọ bụrụ na ezighi ezi ma ọ bụ ezughị ezu.
Ikike ịkwụsị (ikike echefuru) - I nwere ike ịrịọ maka mwepụ ma ọ bụ nhichapụ data nkeonwe gị ma ọ bụrụ na ọ nweghị ezigbo ihe mere anyị ga-eji na-arụ ọrụ ya.
Ikike imechi nhazi - I nwere ikike 'igbochi' ma ọ bụ gbochie nhazi nke data onwe gị. Mgbe anachibidoro data nkeonwe gi, enyere anyi ohere ichekwa data gi, ma ghara ime ya n'ihu.
Ikike ịjụ - I nwere ikike ịjụ anyị ka anyị dezie data nkeonwe gị maka ihe ndị na-esonụ: Usoro nhazi dabeere na ntụrụndụ ziri ezi ma ọ bụ ọrụ nke ọrụ na mmasị ọha na eze / mmega nke ikike ọchịchị (gụnyere proiling); Ahịa ahia (gụnyere akụkọ); na nhazi maka nzube nke nyocha sayensi na akụkọ ihe mere eme. Ikike ndị na-ekwu banyere mkpebi ikpe na ịmepụta ihe.
Mkpebi mkpebi onye ọ bụla na aka ya - Ị ga-enwe ikike ịghara ịdabere na mkpebi nke dabere na nhazi nke onwe, gụnyere proiling, nke na-eweta mmetụta iwu gbasara gị ma ọ bụ dị ka nke ahụ na-emetụta gị.
Anyị na-eji kuki enyere gị aka ịnyagharịa ebe nrụọrụ Weebụ nke Mgbasa ozi dị mfe dịka o kwere mee, yana icheta ozi gbasara nnọkọ gị ugbu a. Anyị anaghị eji nkà na ụzụ a na-enyocha gị ma ọ bụ na-abanye na nzuzo. Ị nwere ike iwepu kuki na teknụzụ nyochaa site na ihe nchọgharị weebụ gị.
Ebe nrụọrụ weebụ Broadcast Beat nwere ihe nchedo ụlọ ọrụ dị iche iche iji kpuchido ọnwụ, mmegbu, na mgbanwe nke ozi n'okpuru njikwa anyị. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe dịka "nchekwa zuru oke" na Ịntanetị, anyị ga-eme ihe niile dị mkpa iji hụ na nchekwa nke ozi gị.
A ga-edezi ihe a na nkwupụta a na URL a ma ga-adị irè mgbe ezitere ya. Ịga n'ihu iji saịtị a na-agbaso ọkwa nke mmegharị ọ bụla, mgbanwe, ma ọ bụ mgbanwe ga-abụ nkwenye gị maka mmezi ahụ. Anyị ga-agwa gị banyere mgbanwe dị ukwuu site na ịchọta onye nwe akaụntụ ma ọ bụ site na itinye ọkwa mara ọkwa na saịtị anyị. Ọ bụrụ na ịnwere ajụjụ gbasara nkwupụta nzuzo a ma ọ bụ mmekọrịta gị na Broadcast Beat, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na [Email na-echebe].